देउवाले ओली मनाउने जिम्मा प्रचण्डलाई दिए, अब मिल्ला त कुरो ? « Light Nepal
देउवाले ओली मनाउने जिम्मा प्रचण्डलाई दिए, अब मिल्ला त कुरो ?
Published On : 14 January, 2018 4:00 pm
काठमाडौं, ३० पुस । प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चाँडै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्नेगरि गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।
दलहरुवीच सहमति नहुँदा प्रदेशको राजधानी तोक्ने काममा ढिलासुस्ती भैरहेको भनेर आलोचना भैरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख दलहरुवीच आन्तरिक सहमति जुटाउने कार्य भैरहेको जानकारी दिँदै आएका छन् ।
देशमा भएका जम्मा ७ प्रदेशमा कांग्रेसले २ वटा प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गर्ने र बाँकीमा पनि दलहरुवीच भागबण्डा मिलाउनेगरि देउवाले तयारी थालेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार देउवाले राजपा, फोरम र माओवादी केन्द्रलाई एक/एक प्रदेशमा प्रमुख बनाउन दिने र एमालेलाई २ दिनेगरि छलफल अघि बढाएका थिए । तर, देउवाको प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्विकार गरिदिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आन्तरिक सहमति कायम गरेर नै देउवाले यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवाको प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्ने भन्दै अस्विार गरिदिए । त्यसैले भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पनि निर्णय नहुन सक्ने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ ।
एमालेलाई मनाउने जिम्मा अहिले देउवाले प्रचण्डलाई दिएका छन् । तर, प्रचण्ड पनि अहिले देउवाले भनेजस्तोगरि सहमत हुन सक्ने अवस्थामा नभएको भन्दै बिच्चिएका छन् । एमालेले तीन वटा प्रदेशमा आफूहरुको मान्छे प्रमुख हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
आफूले प्रस्ताव गरेझैं एमाले–माओवादी केन्द्र सहमतिमा आए एक दुई दिनभित्रै प्रदेश प्रमुख तोकिने देउवाको भनाई रहेको छ । यदि सहमतिमा नआए आफूले ठोस निर्णय पनि चाँडै लिने उनको तयारी रहेको छ ।